I-MDT, Isisombululo esipheleleyo seeprojekthi zeTopography kunye nezoBunjineli- iGeofumadas
Epreli, 2014 AutoCAD-AutoDesk, Okufumaneka, Zobunjineli, Ukuprinta kokuqala, Topography
Abangaphezulu kwama abasebenzisi 15,000 50 kumazwe kwaye iyafumaneka kwi Spanish, IsiNgesi, French kunye IsiPhuthukezi phakathi kwezinye iilwimi, MDT yenye yezona nok ziinkampani benza izicelo geoengineering isithethi kokufika.
APLITOP anayo kwipotifoliyo zalo iintsapho ezine lwezicelo: iiprojekthi ucando, izicelo kwintsimi kwisikhululo iyonke okanye izixhobo GNSS, imigudu kanye photogrammetry digital. Kule meko sithetha MDT, abasebenzisi wayo ophambili olawulo karhulumente, iinkampani zokwakha, ubunjineli, izakhiwo, urbanism kunye neenkampani ezinikelwe ezayame, eqingqiweyo, imigodi, okusingqongileyo, njl, kwakunye iingcali ezizimeleyo.
I-MDT inokufakwa kwiinguqu ezahlukeneyo ze-AutoCAD, kubandakanywa okwakutshanje, kunye nakwezinye iiplatifomu ezingabizi, ezifana neBricsCAD ne-ZWCAD.
MDT avumelane umsebenzisi iimfuno ngokusebenzisa i core lokukala anokuthi esekelwe uguqulelo standard okanye umsebenzi, kunye nenani iimodyuli ozikhethelayo ukuba ahlole, imifanekiso kunye namafu ingongoma.
La nguqulelo oluqhelekileyo ivumela aphila a ntlango usebenzisa iingongoma ezithathwe nasiphi na isikhululo iyonke okanye GPS, ukuphehla imisele ukufumana iiprofayili longitudinal and ezinqamlezayo, ubale imithamo umahluko enemingxuma okanye iiprofayili, ngeso namageduka in 3D.
La inguqu yolwazi Yenzelwe ukunceda umsebenzisi kuzo zonke izigaba zokuzaliswa kweprojekthi yezendlela, urbanizations, amakherries, imigodi, njl. Iquka zonke iimpawu zenguqu egciniweyo kwaye inezixhobo zokuyila ukulungelelanisa okucwangcisiweyo kunye nokuzenzekelayo, ukudweba kwiprofayili yeprojekthi yexesha elide kunye nelayini, ukuvelisa indawo eguquliwe, izintlu zokubala, ukubeka, njl njl.
El imodyuli yezobugcisa luncedo ekusebenziseni ukuqwalaselwa kwee-station zonke, ukubala izilungelelaniso zeendawo, ukuhlawula iipolgoni kunye neenethwekhi, kunye nokwenza ulungelelaniso lweenguqu phakathi kweendlela zokujonga i-geodetic kunye neprojekthi.
El Imodyuli yomfanekiso ikuvumela ukuba ulayishe imifanekiso ye georeferenced kwindawo yakho, kunye nokufaka iifoto kunye nendawo, ukwahlula kwiimashi kwaye unamathisele, utshintshe isisombululo, wenze utshintsho kunye nokuguqulwa, ukufikelela kwiinkonzo zeemephu zewebhu (WMS), njl.
El amacwecwe amacwecwe ivumela umsebenzisi ukuba acacise kwaye acwangcise amafu okubanjwa yi-LiDAR iteknoloji, i-scanners okanye i-photogrammetry izicelo, ezikwazi ukulawula izigidi zamaphupha angeniswe kwiifayile zeefomati eziqhelekileyo. Amanqaku angamelwa ngumbala wendalo, ubungqina okanye iqela. Kwakhona ivelisa iiprofayili zangexesha elide kunye neengcambu ezivela kwi-polyline okanye i-axis, kunye nomzekelo wedijithali ongathunyelwa kwi-CAD.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Nceda iinkonzo ze-WMS kwi-Microstation
Post Next U-Supergeo ujoyina i-GPS PL ukubonelela izixazululo zekeykey ze-iOSOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-7 ziye kwi "MDT, Isisombululo esigqibeleleyo sophando kunye neeprojekthi zobunjineli"
Ukukhanya kuka-Adriana Salazar uthi:
NDINGUMQESHI WOKUFUNDA, IXABELELWE PHI INKQUBO XA UFUNDISA NGAYO, NAYE NENGCACISO YOKUFUNDA OKANYE YOKUQHUTYELA IPHAKATHI KUKHONA INDLELA ENGOKUTHANDA NGAYO
Unokuqhagamshelana nomthengisi wesetyhula ongeyena ilizwe.
UAntónio Petiz uthi:
Inkqubo ye-Gostaria de testar okanye inkqubo ye-MDT TOPOGRAPHY.
Njengoko okanye ukufumana ithuba.
UCarlos Perez uthi:
inkqubo kunye neendidi ezininzi zophuhliso
Vladimir Garcia uthi:
Ndiyakhathalela kwikhosi endiyifumayo kwiColombia
Sawubona Ana Maria, Mkelekile kuAplitop!
Into yokuqala kukubonga umdla wakho, iimveliso kunye neenkonzo, esiqinisekisayo ziya kuhlangabezana neemfuno zakho.
Ungathumela i-imeyile support@aplitop.com, siya kukuthumela ulwazi malunga neeklasi zethu kumgca, apho ukusebenza kunye nobude babo buchazwe, eziyiinyanga ze-2, ukuba unemibuzo esiya kuvuyisa ukukunceda.
15.000 ekungokunje mvume esebenzayo ehlabathini lonke, ngokusivumela ukuba siqhubeke ukuba ingqalelo njengesingqiniso zobugcisa impendulo, umgangatho kunye nenkonzo kuphuhliso izicelo software ye ucando lomhlaba kunye nobuNjineli baseKuhlaleni.
Izixhobo zorhwebo APLITOP
UAna María Segura Marín uthi:
Ndingathanda ukwazi ukuba zikhona izifundo zasimahla ze-MDT zabangasebenziyo… kwi-intanethi okanye buqu… kwabangaphangeliyo